यो तस्विर किन हुँदैछ भाइरल ? खास कारण यस्तो थाहा पाउदा दुनिया चकित – Namaste Host
February 21, 2021 February 21, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यो तस्विर किन हुँदैछ भाइरल ? खास कारण यस्तो थाहा पाउदा दुनिया चकित
यो चित्र अहिले मिममा परिणत भइसकेको छ । तस्विरमा विवाहको पोशाक लगाएको दुलाह उसको कम्प्युटर स्क्रिनमा व्यस्त देखिएका छन् । अर्कोतिर दुलही ओछ्यानमा बसेको देखिएकी छिन् ।
यो तस्विर कहिले र कहाँको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसले निकै नै चर्चा पाइरहेको छ ।
यो पनि : यस्ता २० संकेत देख्नुभयो भने सम्झनुहोस्, नसोचेको धन आर्जन हुनेवाला छ, के हुन् २० संकेत ? विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ ।
त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् ।
१. यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ ।
२ .बोटमा पाकेको सुन्तला या खेतमा पाकेको गहुँ देख्यो भने उसलाई छिट्टै धन प्राप्ति हुने सम्भावना हुन्छ ।